Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kumbvumbi , 05, 2022
Kubvumbi 05, 2022
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vanonzi vaumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushore avo vasina kubvira vauya kubasa pavakapa nevamwe vatongi mutongo wekuti mutongi mukuru wematare Justice Luke Malaba vainge vofanira kuenda pamudyandigere kwete kuvandudza bumbiro remutemo kuti vaenderere mberi vari pabasa.
Nhengo dzedare reparamende dzichangobva mukusarudzwa mumaby-elections adarika dzotoreswa mhiko nhasi.
Kanzuru yeHarare yotadza zvekare kusangana sezvo pavasati pave nenhengo dzakakwana sezvinodiwa pamutemo pachiri pakamirirwa kuti vakakunda musarudzo dzemaby-elections vatoreswe mhiko.
United Nations Security Council yosangana nhasi kuti izeye mhosva iri kupomerwa mauto emuRussia yekuponda vanhuwo zvavo muUkraine.
Nyanzvi mune zvehupfumi dzozeya danho rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, rekudzika matanho akanangana nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu, kana kuti inflation, kuburikidza nekukwidza miripo yekumabhanga kubva pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana (60%) kuenda pazvikamu makumi masere kubva muzana, kana kuti 80 %, pamwe nekumisa musika mutema wemari yekunze kuburikidza nekubvumidza mabhanga kuti atengese pamwe nekutenga mari yekunze.
Vatendi vechiMuslim muZimbabwe nepasi rose vocherechedza mwedzi wakakosha muchitendero ichi weRamadan
Muchirongwa chedu chanhasi cheThe Connection na8pm chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muhupenyu, Mike Hove weStudio 7 ari kutaura nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende chekufamba munzvimbo dzakasiyana siyana ichipa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa cheMobile Registration Exercise.